Raisul wasaaraha Kenya oo meesha ka saaray in dagaal diimeed uu ka dhici karo dalka Kenya . | Starfm.co.ke	Sunday, May 19th, 2013	Home
Raisul wasaaraha Kenya oo meesha ka saaray in dagaal diimeed uu ka dhici karo dalka Kenya .
Published on August 11, 2012 by Sacdiya Garabey · No Comments
Share11.Aug.2012;- Raisul wasaare Raila Odinga ayaa u xaqiijiyay beesha caalamka in kenya uusan ka dhici doonin rabshado diimeed u dhaxeeya dadwaynaha kala diimaha ah ee dalka ku dhaqan.
Raila Odinga ayaa waxa uu sheegay in weeraradii argagixiso ee dhawaan ka dhacay dalkani Kenya gaar ahaan kuwii kaniisadaha aysan dhalin doonin dagaal diimeed dhex mara dadka kala aaminsan diimaha kala duwan .
Raisul wasaare Odinga ayaa waxa uu sheegay in taa badalkeeda weeraradii dhawaan lagu qaaday kaniisadaha Garissa ay sii xoojiyeen xiriirka u dhaxeeya muslimiinta iyo masiixiyiinta dalkani Kenya .
Raisul wasaare Raila odinga ayaa dhanka kale carabka ku adkeeyay in Kenya aysan qatar ugu jirin in gacanta ay u gasho dad asal raac ah .
Mr odinag ayaa beesha caalamka ugu baaqay in ay diirada saaraan sidii xasilooni iyo kala danbeeyn looga dhalin lahaa dalka soomaaliya ee ay Kenya dariska yihiin .
Raila Odinga ayaa waxa uu farta ku fiiqay in soomaaliya iminka hormar wanaagsan uu ka jiro loona baahanyahay in la xaqiijiyo ka mira dhalinta nabada soomaaliya .
Raisul wasaaraha dalka Kenya ayaa hadaladaan jeediyay xili uu kulan kula qaatay magaalada London Xoghayaha arimaha dibada ee dowlada Biriten Mr William Hague .